Maamulka Puntland oo sheegay inay mamnuuceen dadka India ka imaanaya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maamulka Puntland oo sheegay inay mamnuuceen dadka India ka imaanaya
Wasiirka Caafimaadka Maamulka Puntland Dr Jamac Farax Xasan oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa Magaalada Garowe ayaa ka hadlay amaro la soo saaray oo dhanka Caafimaadka ah kuwaasoo la Xariira in dadka ka imaanaya wadanka hindia aysan imaan Karin deegaanada Maamulka Puntland.
Wasiirka ayaa sheega in ayagoo ilaalinayna badqabka muwaadiniinta la joojiyay dadka ka imaanaya wadanka India ee Cudurka Covid 19 uu had afara ba’an ku hayo wuxuuna ka codsaday dadka dalkaas ka imaanaya inay sii joogaan inta xaaladu is badalayso, Hadii ay dhacdo in qof uu yimaadaana ay diyaariyeen inay galiyaa labo todobaad oo karantiil ah si loo hubiyo inuu caafimaad qabo meesha uu doonaba ha soo maree.
Wasiirka Caafimaadka Puntland ayaa sidoo kale kula taliyay dawlada dhexe iyo maamulada kale ee dalka Soomaaliya ka jira inay go’aan kan la mid ah qaataan si looga badbaado in dad xanuunka qaba ay dalka yimaadaan.
isagoo sidoo kale bulshada la wadaagay in bishan dhamadkeeda la bilaabi doono wajiga labaad ee talaalka Covid19, kan labaad ayaa waxaa la siin doonaa dadkii horay u qaatay kii koowaad, halka dadka aan kii hore qaadana loo sheegayo in wali talaalku diyaar ku yahay xarumaha Caafimaadka ee degmada ama gobolka ay joogaan, Maadaama uu talaalku yaraynayo fiditaanka xanuunka.
Previous articleDHAGEYSO:Garissa oo laga dareemaya u diyaar garowga ciidda
Next articleTaliyaha guud ee booliska oo amray in gacanta lagu soo dhigo rag dhulka ku jiiday nin ismaamulka Kwale